abcnepali | » तोक सेवामा जागिर, मुठीमा गुठी : मन्त्रीलाई खोला, युवालाई खाडी ! तोक सेवामा जागिर, मुठीमा गुठी : मन्त्रीलाई खोला, युवालाई खाडी ! – abcnepali
तोक सेवामा जागिर, मुठीमा गुठी : मन्त्रीलाई खोला, युवालाई खाडी !
abcnepali June 15, 2019
यो हप्ता देशमा के–के मात्र भएन १ पुल उद्घाटन गरेर फर्किएका मन्त्री गाडीमा चढी चढी पुल नभएको खोलामा डुबे ।यता देशमा रेल ल्याउन लागेका मन्त्री खोलामा डुबेको खबर आउँदा उता रेलको सपना देखाउने प्रधानमन्त्री लण्डनबाट पानी मुनि चल्ने रेल चढेर पनि ओभानै लुगामा पेरिस पुगेको खबर आयो । लोक सेवा आयोग तोक सेवाको पुरानै बाटोमा फर्कियो । प्राचीन गुठी मुठीमा पार्ने काम यसै साता सुरु भयो ।
स्कुल क्याम्पसका चौरमा दुबो उखेल्ने काम दिएर रोजगार कार्यक्रम सुरु भयो । देशभित्र रोजगारी अभियान सुरु हुँदा विदेश जानेलाई बाटो फराकिलो बनाउने काम पनि नबिर्सिकन भैरह्यो । यी सबै काम यसै साता सुरु भए । अथवा नहुनुपर्ने सबैथोक भयो, हुनुपर्ने केही भएन ।सतहमा एकैपटक देखिएका यी उदेकलाग्दा कुरालाई एकछिन एकै ठाउँमा राखेर घोलघाल पारौँ है त !
लोक सेवा र तोक सेवामध्ये कुन चाहिँ सजिलो होला ? उत्तर सजिलो छ – तोक सेवा । लोक सेवामा घुँडा धसेर, टुपी कसेर, कलम टोकीटोकी कनीकुथी लेखेर, भनसुन गरेर, पाउ परेर, ज्यू हजुर गरेर मात्र सरकारी जागिर खान पाइन्छ । तर तोक सेवामा नेताजीलाई धनुष्टंकार नमस्कार गरे मात्र पुग्छ । त्यसपछि नेताजीले आफै जागिर दिन्छन् । न टुप्पी कसेर पढ्न पर्छ, न कलम धसेर लेख्न ।
तोक सेवाले धनुष्टंकार नमस्कार गर्दै दिनरात पाउ मोल्नेलाई मात्र होइन, नमस्कार खाँदै र पाउ तेर्साउँदै गम्किनेहरुलाई पनि फाइदा पुग्छ । सेवा लिनेलाई पनि फाइदा, सेवा दिनेलाई त झन् दीर्घकालसम्मको फाइदा ।
पढ्दै नपढी जागिर पाउँदा कार्यकर्तालाई फाइदा । ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ता हुँदा नेताजीलाई फाइदा । जे भन्यो त्यही गर्न पाइने, जति मन लाग्यो त्यति खान पाइने । आज नगरे कहिले गर्ने ? आज नखाए कहिले खाने ? आफू ठाउँमा भएकै बेला आफूले भनेअनुसार गर्न नपाए, अरुबेला कहिले गर्ने ?
देश लोक सेवामा भन्दा तोक सेवामै चलेको राम्रो । त्यसैले त लोक सेवालाई तोक सेवा र ठोक सेवा बनाउन नेताजीहरु कम्मर कसेर लागेका छन् । लोक सेवालाई तोक सेवा बनाउन पाए ठाउँमा आफ्ना मान्छे राख्न पाइन्छ । अनि गुठीलाई मुठीमा लिन पाए भूमाफियासँग मित लगाउन मिल्छ ।
बालुवाटार नै बालुवाको भाउमा किनबेच भैसक्दा गुठीलाई मुठीमा पार्न खोज्नु नयाँ कुरा पनि भएन । दुई तिहाईले जे गर्न खोज्यो, त्यही हुनुपर्छ । तर गुठीको भरमा जात्रामात्रा, संस्कृति र परम्परा धान्दै आएकाहरुलाई यो कुरा चित्त बुझेन । गुठीलाई मुठीमा लिन हुँदैन भनेर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन गए ।
पहिलेपहिले माइती घर जाँदा सासुले बुहारीलाई बेला न कुबेला गएकी भनेर गाली गर्थिन, हप्काँउथिन् । कुनै कुनै बुहारीले त पिटाई पनि भेट्थे । अहिले जमाना फेरियो । माइतीघर जाँदैमा बुहारीले सासूको हातबाट पिटाई खानु पर्दैन । तर प्रहरीले चाहिँ माइतीघर जानेलाई पिट्न थालेको छ । गुठी विधेयकको विरोधमा माइतीघरमा धर्ना दिन गएकालाई प्रहरीले लौरोसँगै पानीको फोहोरा वर्षायो । चर्को घाममा पानीको फोहोरा पाउँदा केहीलाई त अलिअलि मज्जै भयो होला । तर लौरो र लात्ती खानेहरुले चै पानीको साटो पसिनाका धारा छुटाए । चित्त दुखाए ।
यता माइतीघरमा पानीको फोहोरा चलिरहँदा स्याङ्जाको खोलामा डुबुल्की मार्न पुगेका यातायात मन्त्रीलाई चाहिँ साहै्र नमज्जा भो । मन्त्री महोदय एउटा खोलामा हाल्न लागेको पुल उद्घाटन गरेर गमक्क परेर गाडीमा फर्किंदै थिए । तर अर्को खोलाले पुल नपाएको झोँकमा मन्त्रीको गाडी डुबाइदियो । रिबन काटेर अबीर जात्रा गरि फर्केका मन्त्रीको रंग खोलाको पानीले स्वात्तै पखालिदियो । मन्त्री महोदय खाल्डोमा परेको मुसोझैँ भिजे । चिसै दौरा सुरुवालमा फर्किए ।
यसरी खोलामा ओहोरदोहोर गर्दा को कति डुबे, त्यसको हिसाब भएन । तर मन्त्री डुब्दा चारैतिर हल्लाखल्ला भयो । यातायातमन्त्री खोलामा डुबेर निस्कँदै गर्दा प्रधानमन्त्री युरोपमा समुन्द्र मुनिको भूमिगत रेलमा सयर गर्दै थिए ।
यहाँ रेल चल्ने ठेगान छैन । रेलकै कुरा गरेर चर्चा कमाएका प्रधानमन्त्रीले उता एउटै रेलमा चढेर जमिनमाथि, जमिनमुनि र पानीमुनि कुद्ने रेल यात्राकोे आनन्द लिए । पहिले राजनीतिमा भूमिगत हुँदा लुक्नुपथ्र्यो, अहिले भूमिगत रेल चढ्दा सल्लाहकारहरुले फोटो हालेर प्रचार गरिदिन्छन् । अब नेपाल फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले रेलको गफमा केही लिटर तेल त थपेरै कुरा गर्लान् । हिजोआज देश रेलका कुरामा मसला जसरी तेल थप्दा आउने हाँसोको प्रतीक्षामा छ । प्रधानमन्त्रीका मसालेदार गफ सुन्न धेरै मानिस बिमानघाट पुगेको हेर्न मलाई चाहिँ आजैदेखि टीभी बन्द गर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका मसालेदार गफ कुनै मसालेदार फिलिमभन्दा कम हुन्नन् । फिलिम मसालेदार र धमाकेदार होस् या नहोस्, त्यसलाई राम्रो छ भन्नुपर्छ । नत्र फिल्म राम्रो छैन भनेर समीक्षा गर्दा प्रहरीको खोरमा पुग्ने डर हुन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले फिलिमको शैलीमा भन्ने कुरा पनि पत्याउनुपर्छ । राम्रो छ भन्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्दा उहाँसँग जोडिएर आएको एउटा कार्यक्रमको पनि यतिबेला खुब चर्चा छ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यसले सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने खेलो भयो भनेर विरोधीले विरोध गरेका छन् । नामै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । अनि प्रधानमन्त्री र उहाँको नजिक भएका मान्छेलाई नभए अरु कसलाई हुन्छ ? यदि भिन्न पार्टीका कार्यकर्तालाई काम र दाम दिन थालिएको छ भने पनि रोक्नुपर्छ । नामै प्रधानमन्त्री रोजगार भएपछि प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीलाई मन पराउने मान्छेलाई मात्र रोजगारी दिनुपर्छ । अनि पो नाम अनुसारको काम हुन्छ । काम अनुसारको दाम मिल्छ ।
त्यसमाथि काम नपाउनेलाई काम र बेरोजगार भत्ता दिनुभन्दा विदेश धपाउनै सजिलो हुन्छ । लोक सेवा पास गरेर सरकारी जागिर खान्छु भनेर मुख आँ गर्नेहरु ट्वाँ परे । नेताको दौराको फेरो नसमाएरै काम गर्छु भन्नेहरु पनि हेरेका हेर्यै हुने भए । अनि ट्वाँ पर्ने र हेरेको हेर्यै गर्नेहरुलाई देशमै राखेर किन पाल्ने ? त्यसैले विदेश धपाउने । सित्तैमा जान पाइन्छ भन्दै विभिन्न देशसँग सम्झौता गर्ने । फाइल साटासाट गर्ने । के के न गर्छु भन्दै धाक लगाउने, तर पुरानै कुरामा रमाउने । विदेशबाट आएकै पैसामा दंग पर्ने ।
कुरो जति गरे पनि, दिमाग जति घुमाए पनि कुरो यही हो– नेता रिझाउन सक्नेलाई तोकसेवा, रिझाउन नसक्नेलाई खाडीकै मेवा १ मुठीमै गुठी, सक्नेले खान्छन् लुटीलुटी, नसक्नेले विरोध गर्छन् उठीउठी ।